Dabeecadaha Lagu Garto Qofka Uu Garaadkiisu Sarreeyo (Higher IQ) | Codka Harawo
You are here : Codka Harawo » Arimaha Bulshada iyo Aragtida Akhristaha » Dabeecadaha Lagu Garto Qofka Uu Garaadkiisu Sarreeyo (Higher IQ)
Posted by admin on May 25th, 2019 08:57 AM | Arimaha Bulshada iyo Aragtida Akhristaha
Maskax badnaantu waa hibo uu Ilaahay siiyo cidda uu doono, waa awood qarsoon oo uu qofku leeyahay, taas oo u suurta galisa in uu noqdo ruux leh hal-abuurnimo, ikhtiraac iyo waxyaabo fiican oo uu bulshada ku soo kordhiyo. Haddaba Waxaa jira astaamo lagu tilmaansan karo ruuxa leh garaadka iyo maskaxda sida aadka ah uga sarraysa filkiisa. 1-Gooni Socodnimo (Kelinimo): Cilmi-baadhisyo door ah ayaa daaha ka fayday in qofka uu aadka u sarreeyo heerka garashadiisu uu yahay qof aan bulshaawi ahayn. diraasaadka ayaa sidoo kale iftiimiyey in dhexgalka bulshud uu saamayn taban ku leeyahay guud ahaan farxadda dadka maskaxda badan.
2- Werwer Badnaan: Dadka maskaxda badan waa kuwo ka warwar badan bulshada inteeda kale. Sida tibaaxeen cilmi-baadhisyo dhawr ah ayaa sheegay in dadka walaaca badan uu garaadkoodu sarreeyo. Sababta oo ah dadkan maskaxdooda ayaa aad u shaqaynaysa oo waxa ay sii saadaalin karaan khataro innagu soo fool leh oo ayna dadka kale odorosi karin. 3- Xanuun Maskaxeed: Saynisyahanno ayaa daaha ka fayday in Carruurta ay maskaxdoodu aadka u surrayso u dhawyihiin in aakhirka ay ku dhacdo waxa loo yaqaano (Bipolar Disorder) oo ah Jirro maskaxeed taas oo ay xaaladda qofku is degdeh ah isu gadgadiyeyso, murugo, cabsi, Isku buuq, cadho iyo faraxad si dhakhso ay isu badbadellaya.
4- Aragti Faquuqan: dadka maskaxadda badani hore ugu ma qancaan caadooyinka iyo waxyaabaha ay bulshadu aaminsantahay ilaa ay caddaymo u helaan. Waa dad arrimaha ka eega xagal gooni ah. Markaa dadkan fikirkooda ayaa ka diwan dadka kale. 5- Cid walba aaminid: Dadka garaadka badani waa kuwo ku kalsoon badi dadka kale, ma aha dad ay shaqayso qaybta shakkiga ama bacda ee ku aaddan dadka ay wada dhaqmayaan ama ay asxaabta yihiin.
6-Wahsi Iyo Shaxshax La’aan: In uu qofku noqdo Caajis waa astaan muujinaysa in uu maskax badan yahay. Inta badan dadka maskaxda badan waxaa lagu arkaa isku dhexyaacsanaan iyo kala nidaamin la’aanta, waraaqahooda, buugaagtooda, dharkood iyo hoygoodaba, waa yara basari!
7- Saamalayl iyo Habeen shaqayn: Cilmi-baashis ayaa sheegtay in dadka maskaxda badan ay xilli dambe seexdaan habeenkii. Diraasad ayaa muujisay in dadka garaadkoodu ka hooseeyo 75 darajo ay hurdaan inta u dhaxaysa 11:41 PM ilaa 7:20 Am, halka dadka garaadkoodu ka wayn yahay 125 darajo ay hurdaan inta u dhaxaysa 12:29 PM ilaa 7:52 Am.
Digniin: (Ujeeddadu ma aha in aad dabeecadahan isu yeesho ee waa in aad ogaato wax ka ogaato dabaacadaha dadka Maskaxda badan)
« Thank you ambassador ayrorit Mohmed yasin (PH.D)
Itoobiya oo la safan doonta Soomaaliya iyo Sababta ay Kenya uga…. »